अत्यन्त दुखत खबर ! आज विहान एक यात्रुवाहक बस दु’र्घटना हुँदा कम्तीमा ३५ जना’को मृ’त्यु – Khoj Dainik
अत्यन्त दुखत खबर ! आज विहान एक यात्रुवाहक बस दु’र्घटना हुँदा कम्तीमा ३५ जना’को मृ’त्यु
February 18, 2021 adminLeaveaComment on अत्यन्त दुखत खबर ! आज विहान एक यात्रुवाहक बस दु’र्घटना हुँदा कम्तीमा ३५ जना’को मृ’त्यु
काठमाडौं । बाँके जिल्लाको राप्ती सोनारी गाँउपालिका २ मुगुवा खोलास्थित फागुन ३ गते नेपाली सेनाको बस दुर्घटना हुँदा बसमा सवार १० जना गम्भीर घाइते भएका छन् । सोलु नाम्चेबाट कालिकोट संसेर गुल्मको लागि हिडेको ना ५ ख ५९१ नम्बरको बसमा नेपाली सेनाका क्याप्टेन उमेश राईसहित २३ जना सवार मध्ये १० जना घाइते भएका हुन ।उक्त बसको गति अनियन्त्रित भई दुर्घटना भएको बताइएको छ । सो दुर्घटनाबारे जानकारी पाउनासाथै सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नम्बर ४२ रिजर्भ गण बाँकेबाट तत्कालै एपीएफ टोली उद्धार कार्यको लागि खटिएको हो । गम्भिर घाइते भएकाहरुलाई उपचारको लागि नेपाली सेनाको अस्पताल नेपालगंज राझातर्फ पठाइएको छ ।****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
भागरथी स्कूलवाट निस्कनु डेढ घण्टा अघि नै उनी स्कूलवाट निस्कीएका थिए । भागरथी पढ्ने स्कूलमै पढ्ने उनी कतिबेला भागरथी घर जाने आउने गर्छिन भन्ने सबैकुरा थाहा थियो । भागरथी कक्षा १२ मा पढ्थिन् भने दिनेश कक्षा ११ मा । दिनेशको विद्यालय छुट्टी समय ३ बजेर १५ मिनेटमा हुन्थ्यो भने भागरथीको २ बजेर ३० मिनेटमा । तर माघ २१ गते दिनेश विद्यालयवाट छिटै निस्केका थिए । उनी घटना गराउने योजनाकै कारण छिटो विद्यालयवाट निस्कीएको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ । तर ह ‘त्या स्वीकार गरेका दिनेशले आफूले ब ला/त्का र नगरेको बयान दिएको प्रहरी स्रोत बताउँछ । भट्टले घटनामा संलग्नता स्वीकार्दै साबिती बयान दिएको भन्दै बैतडी प्रहरी स्रोतले भन्यो, ‘पुरानो परिवारिक रि’सिबीले बदला लिन यस्तो गरेँ भनेका छन्।’ साथै उनले भागरथीलाई लामो समयदेखि एकतर्फी रुपमा मन पराएको बताएका छन् ।
क्याप्टेनसहित २३ जना सवार नेपाली सेनाको बस दुर्घटना हुँदा १० जना गम्भीर घाइते
एकाबिहानै दुखद खबर : बसको ठक्करबाट दी’पाको घटनास्थलमै मृत्यु!!